Izixhobo: Iifonti zasimahla zoSetyenziso loRhwebo oluSimahla | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Awunakho ukwenza uyilo olulungileyo ngaphandle kokusebenzisa uhlobo oluhle lokuchwetheza njengesiseko. Esi sesona sizathu siphambili sokuba kutheni amakhulukhulu abaqulunqi babonakala benengxaki yokufumana kubo: kwaye bengahlawuli ncam. Inkqubo ye- iifonti zasimahla zifunwa kakhulu kwi-intanethi.
Kungenxa yokuba amaxabiso ayo akanakufikelela kuyo nayiphi na i-freelancer: kwaye ngendlela ethile iyavakala, kuba umsebenzi wokwenza uhlobo lochwethezo luchanekile, luyasebenza kwaye lude. Ukusuka apha ndithatha ithuba lokuqubuda kubo bonke abo banoxanduva lokudala oonobumba, kuba umsebenzi wabo awubonwa ngamehlo kwabaninzi.
Nabani na othi ifonti yasimahla ayikaze ikhutshelwe uyaxoka. Ukusuka apha ndifuna ukubonisa ukuba iingcali kwicandelo zihlala ziqinisekisa ukuba Iindidi zokukhuphela simahla zihlala zineempazamo ezithile, kwaye esona sizathu siphambili seendleko zazo. Kodwa kuyinyani ukuba uninzi lochwephesha abasaqalayo, bathatha isigqibo sokwabelana ngokukhululekileyo ngendalo yabo yokuqala ukuze bandise "ukuthandwa" kwabo: eneneni kukho iifonti onokuzikhuphela ngokunikela isixa semali ocinga ukuba kufanelekile kubo.
Enye ingxaki ekhoyo nge iifonti zasimahla: iphepha-mvume lakho lokusebenzisa. Kwaye ayisiyiyo yonke into esebenza ekusebenziseni umsebenzi owenzela abathengi bakho (banokungagunyazisi ukusetyenziswa kwabo kwezorhwebo). Bahlala befika kwikhompyuter yakho kwifolda, apho ifayile yefonti ihamba kunye nefayile yokubhaliweyo ehlala ibizwa ngokuba yi-README. Ewe, ngokuchanekileyo: le fayile uyipasileyo ngokugqwesileyo kwaye awuzange ukhathaze ukuyivula. Ewe, mhlawumbi lixesha lokuba uyihlolisise, kuba ulwazi oluvela apho lunokubonisa ukuba uza kwenza into engekho mthethweni okanye hayi.
Fumana iifonti zasimahla ekusetyenzisweni kwasimahla kurhwebo
Namhlanje unethamsanqa: uza kufumana elona phepha libalaseleyo Fumana iifonti zasimahla zokusebenzisa simahla ezorhwebo. Ingama lakho? Squirrel. Eli phepha likuvumela ukuba ukhangele ngohlobo (i-calligraphic, comical, owayephila, enzima ...); ngeelayisensi, ngobukhulu bosapho okanye ngeelwimi. Iluncedo, akunjalo? Ngoku jonga iposti ye- iifonti kunye nendlela yokulawula ngokuchanekileyo, uya kuyidinga.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Iifonti kunye nendlela yokuzilawula ngokuchanekileyo
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Imithombo » Iifonti zasimahla ezisetyenziselwa ukurhweba simahla
Enkosi ngegalelo Elena
Iiwebhusayithi ezi-5 apho unokukhuphela ii-icon zasimahla
Itafile yamaxabiso ngefomathi yePSD